Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho - Awdinle Online
Wadada Xaafadda Daarusalaam ee Muqdisho waxaa barqonimada maanta ka dhacay Qarax sababay dhaawac soo gaaray Ciidanka katirsan Ilaalada nabadgalyada Waddooyinka (Traffic) oo Gawaarida weydiiya Ruqsadda (License) isla markaana hubiya Sumadda ku xiran.
Ilo kala duwan ayaa Mustaqbal u xaqiijiyay in Qarax miino loo dhigay Halka loo yaqaan Xoola Qalka oo u dhaxeeya Daarusalaam & Isgoyska Janaraal Daa’uud, waxaana goobta tagay Ciidamada ammaanka oo qaaday askarta dhaawacantay.
Muddo kooban ayay xireen wadada oo waxaa istaagay isu socodka Gaadiidka & Dadka, baaris kooban kadib waxa ay dib u fasaxeen Gaadiidka sida ay Mustaqbal u sheegeen qaar kamid ah Wadayaasha ka howlgalla jidkaas.
Magaalada Muqdisho waxaa dhowr jeer ka dhacay Qaraxyo qaarkood loo dhigay Saraakiil & Ciidamo katirsan Dowladda oo sababay dhimasho & dhaawac, waxaana inta badan sheegta Al-Shabaab.
Previous articleCiidamo xoogan oo la dhigay wadooyinka gala Madaxtooyada
Next articleKulanka Golaha Shacabka oo furmay & Xubno lagu ansixiyay